यस्तो बन्दै छ,२२ महिनाभित्र नेपालीपन झल्कने आधुनिक तवरको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला यस्तो देखियो डिजाइन ! – Life Nepali
यस्तो बन्दै छ,२२ महिनाभित्र नेपालीपन झल्कने आधुनिक तवरको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला यस्तो देखियो डिजाइन !
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको रामपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको डीपीआर तयार भएको छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण थालेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार भएको छ । तयार भएको डीपीआर भरतपुर महानगरपालिकामा एक कार्याक्रमका बीच सार्वजानिक गरिएको छ । कमलको फूलसँगै नेपालीपन झल्कने गरी आधुनिक तवरको रंगशालाको नमुना तयार गरिएको छ । रंगशालाको प्रवेशद्वारमा गौतम बुद्धको शालिक निर्माण गरिने छ ।
भित्री भागमा परम्परागत कलात्मक शैली झल्कने गरी रंगशाला निर्माणका लागि नक्साङ्कन गरिएको देखाइएको छ । डीपीआर तयार भइसकेकोले अब कामले गति लिने फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले बताउनुभयो। अहिले समान्य काम भइरहेको बताउँदै उहाँले डीपीआर नै आइसकेपछि सबै कामहरु व्यवस्थित र द्रुत गतिमा हुने जानकारी दिनुभयो । सरकारको कर छुट गराउन सकेमा रंगशाला तयार गर्न २ अर्ब ६० करोड हाराहारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सबैको सहयोगबाट यो परियोजना सम्पन्न गर्नु पर्ने बताउँदै भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्षलाई सहयोगको आव्हान गर्नुभयो ।
डीपीआर निर्माणको काम नेपाल र भारतका दुई कन्सल्टेन्सीले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । नेपालको क्रियटिभ र भारतको हफिस नामका कन्सल्टेन्सीले डीपीआर तयार गरेका हुन् । रंगशाला निर्माण अवरोध हुँदा डीपीआरको काम पनि रोकिएको थियो। रङ्गशाला क्षेत्रलाई जस्ताले बार्ने काम, निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने मजदुर बस्ने हल,कार्यालय निर्माण, कर्मचारी आवास गृह, गोदाम घर, सुरक्षाकर्मी बस्ने घरलगायतका आवश्यक संरचना निर्माण भइसकेको छ । रंगशाला स्तुपा आकारको हुने छ भने क्रिकेट खेल मैदान कमलको फूल आकारको हुने छ । रंगशालामा ४ वटा द्वार हुनेछन् । जसमा २५ हजार दर्शकहरु अट्ने क्षमताहरु हुनेछ । आउँदो २५ वर्षपछि हुने प्रविधि अहिले नै प्रयोग गरेर नक्साङ्कन गरिएको छ ।
चितवनको रामपुरमा रहेको २० बिघा ६ कट्ठा जमिनमा रङ्गशाला निर्माण गर्न लागिएको हो । अहिले बन्न लागेको रङ्गशालामा ३५ खेल खेलाउन सकिने छ । समयमा रकम जुटाउन सकेमा २२ महिनाभित्रमा रंगशला तयार हुने फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले बताउनुभयो । रंगशालालाई स्पोट्र्स हबको रुपमा विकास गरिने छ । यो रंगशालामा क्रिकेट मात्र होइन अन्य खेलका लागि उपयोग हुनेगरी बनाइने छ । यो रंगशालामा फुटबल, भलिबलसहित, नेपालको मौलिक खेल डण्डीबियोसम्म खेल्न सकिने गरी बनाइने योजना रहेको छ । क्रिकेट खेलाडीहरु उत्पादन गर्न एकेडेमी पनि रंगशालाभित्र रहनेछ ।
Previous धुर्मुस–सुन्तलीले नि’र्माण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको डी’पीआर त’यार !
Next नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानमा ज्ञानेन्द्र मल्ल
3 months ago LifeNepali
हार्दिक बधाई ! भारतीय खेलाडीलाई उछिन्दै नेपालकी चेलीले जितिन् स्वर्ण पदक !